Mareykanka Oo Shaaciyay Sawirradii Ugu Horreeyay Ee Weerrarkii Baqdaadi | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Wararka Mareykanka Oo Shaaciyay Sawirradii Ugu Horreeyay Ee Weerrarkii Baqdaadi
Madaxa taliska dhexe ee ciidammada Mareykanka, Janaraal Kenneth McKenzie, ayaa sheegay in dhismayaasha la burburiyay ay u muuqdeen “meel baabuurta la dhigto oo kale oo ay ku yaalaan godod waa weyn”.
Janaraal McKenzie ayaa sheegay in laba carruur ah ay Baqdaadi godka kula dhinteen – oo tirada carruurtu saddex ma aanay aheyn sida lagu sheegay wararkii hore.
“Waxa uu u guurguurtay godka isagoo wata laba carruur ah halkaas ayuuna isku qarxiyay iyadoo dadkiisa ay barxadda ku sugan yihiin. Waxaad ficilkiisa ka garan kartaa qofka uu ahaa,” ayuu ka sheegay shir jaraa’id oo uu qabtay.
“Taasi waa sida aan u arko waxa uu sameeyay. Wax kale oo aan xaqiijiyo iima suuragelin oo ku saabsan ilbiriqsiyadii ugu dambeeyay ee noloshiisa. Ma xaqiijin karo.”
Janaraal McKenzie ayaa sheegay in afar haween ah – oo xiran suuman laga soo buuxiyay walxaha qarxa – iyo hal nin lagu dhex dilay dhismaha.
Waxa uu intaasi ku daray: “Waxaan doonayaa inaan caddeeyo walow uu jiray cadaadis aad u sarreeya iyo heerka sare ee uu howlgalku ahaa in dedaal ballaaran la sameeyay si loogaga gaashaanto in dadka rayidka ah ay waxyeelo soo gaarto, carruurtana la ilaaliyo kuwaas oo laga shakisnaa inay gudaha dhismaha ku sugan yihiin.”
Waxa uu sheegay in haraadiga maydka Baqdaadi ayaa waxaa loo duuliyay saldhigga si loo baaro haybtiisa markaa kaddibna waxaa lagu aasay badda 24 gudahood markii uu dhintay “taas oo ah sida ay dhigayaan shuruucda iskudhacyada hubaysan”.
Previous articleIlhan Cumar oo Sheegtay In ay Si Dhaw Ula Socoto Dhibaatada Fatahaadaha Soomaaliya Ka Dhacey.
Next articleDowlada Turkiga Oo Si Cara Leh Ugu Jawaabtay Faransiiska